Chitoro cheSelfridges, chakatsaurirwa kune Apple Watch, zvakare inovhara | IPhone nhau
Chitoro cheLondon cheSelfridges, chakatsaurirwa kune Apple Watch, zvakare chinovhara
Nezvese wongororo, iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch pamusika. Apple yakwanisa kuvhura chishandiso chine dhizaini yakakura uko mhando dzese dzekushandisa dzinogona kuiswa uye izvo, pamwe nenyaya yekuti chero zvese zviri paapuro zvinotengesa zvakanaka, zvakabatsira mukubudirira kwayo. Asi iyo Cupertino wachi yakapfuura nenguva dziri nani, zvirinani maererano nekutengesa, kana izvo zvinoita kuti tifunge kuti chitoro Selfridges London yakavharwa.
Sezvakaburitswa neMacRumors nezuro, iyo Selfridges Apple Watch chitoro hachioneke pa list kubva kuzvitoro zveApple muLondon, izvo zvingangodaro zvinoreva kuti haisisipo nekuti Tim Cook nekambani vafunga kuvhara chitoro. Ichi ndicho chitoro chechipiri cheApple Watch icho avo vari muCupertino vakavhara munguva pfupi, chinova chikonzero chekufungidzira pamusoro pekuti Apple smartwatch yekutengesa iri mune hutano hwakanaka here kana kwete.
Selfridges Apple Watch haisisiri yakanyorwa sechitoro cheApple muLondon
Iyo gallery isingachaoneke seimwe yezvitoro zveApple muLondon yanga ichishanda zviripo kubvira iyo Apple Watch yakatanga kutengeswa munaKubvumbi 2015. Sezviri pachena, kuvharwa kwezvitoro zvekutanga zvakatsaurwa kune smart smart yeblock ndiko kubvuma kusiri pamutemo izvo vakatadza kuvhura, kwete zvekare. Pakutanga, Apple yaida kutengesa "chinhu chayo chaicho" sechishongedzo chemafashoni, ndosaka vakafunga kuchisimudzira muzvitoro zvakazvipira kwazviri, asi zvinoita sekunge vakakanganwa chimwe chinhu: hatina kuenda muchitoro cheApple kuti tione imwe chete. chigadzirwa; Takapinda kuti tione zvese zvavainazvo. Uye kana iyo iPhone, inova mudziyo unonyanya kukosha wekambani, isina zvitoro zvayo, nei wafunga kuti zvitoro zveApple Watch zvinoshanda? Kana saka ndinofunga.
Kuti uongorore zvimwe zvingaitika, chimwe chikonzero nei Apple inogona kunge ichivhara zvitoro izvi ndechekuti vaive nazvo, kureva kuti, chinangwa chavo chaive kusimudzira iyo Apple Watch mumwedzi yayo yekutanga yehupenyu muzvitoro zvake kuitira kuti timuzive uye ikozvino zvatatoziva zvakawanda nezvake ivo havana basa. Kunyangwe pandinonyora izvi ndinoramba ndichifunga kuti hazviite pfungwa zhinji.
apuro chitoro chakafanana muParis chichavharawo mwedzi uno, Lafayette, saka zvinoita sekunge hapana kudzokera kumashure. Zvingangodaro, iyo inotevera apple wachi wachi modhi inongotengeswa chete mune zvakajairika Apple Stores.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Chitoro cheLondon cheSelfridges, chakatsaurirwa kune Apple Watch, zvakare chinovhara
Teregiramu yatotibvumidza kudzima meseji dzakatumirwa